Inle Lake: A Peaceful Place | Myanmar Business Today
Home Entertainment Inle Lake: A Peaceful Place
Inle Lake isafavorite of foreign and local travelers alike. The ecosystem formed around it is attracting more and more visitors. Poems, songs, stories and paintings portraying the beauty of the lake have also contributed to its reputation around the world.
For most visitors to Myanmar, the lake ranks just below Bagan on the list of must-see destinations. The country hasawealth of beautiful places, but Inle is unique and different in many ways.
The beauty of the lake itself and the surrounding mountains,acool weather even in the summer and the unique leg-rowing technique practiced by its fishermen combine to make the place attractive to tourists.
Located in Nyaung Shwe Township, Shan State, Inle is Myanmar’s second-largest lake after Indawgyi in Kachin State. The lake is 116 sq.m. and its waters are 900 meters above sea level. Notaman-made lake, everything about Inle will make you feel closer to nature and forests.
The best time to visit Inle is between November and February. The cost of going there is onlyalittle higher than your average everyday expense. While at the lake, you can takeamotor boat to visit nearby landmarks and famous places forareasonable price.
Ridingaboat with the breeze caressing your face isarefreshing and exciting experience. The sight of fishermen rowing their boats and spreading their nets will amaze you. They are one of the key attractions of the lake and photos of them have won numerous awards.
On the lake you will see floating plantations belonging to local people, and from these you can learnabit more about the local culture. You can also visit the floating market where boats gather in one place to offer crops, vegetables, meat and local foods. People selling and buying things on boats is something to behold, and certainly different from what you usually see atastreet market. Local festivals and events are different, too.
Local authorities, working to promote tourism, are trying to preserve the lake and its ecosystem, as the lake is becoming shallow and its ecosystem is deteriorating. In 2010, Inle lost much of its volume due to unusually hot weather and late rainfall. Local authorities, with the help of experts, are trying to address environmental issues.
If you love food, you should try local food at one of the restaurants on the lake or in Nyaungshwe city. There is alsoafarmhouse restaurant where you can enjoy not only delicious food but also nature; it is on the road to Khaungtai Hot Spring near Nyaung Shwe.
After exploring the area, you can opt to enjoy the sight of mountains and forests while sipping delicious wine. Local winery Red Mountain is accessible by bike, motorbike or car from Nyaung Shwe. We recommend going there by bike or motorbike, as this offers better experience than travelling by car. On my visit to Red Mountain, I couldn’t help saying ‘How beautiful Shan State is!’
အင်းလေး (သို့မဟုတ်) အေးချမ်းနေဆဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း
စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်စေဖို့နဲ့ စိတ်ရော လူရော အပန်းပြေ လန်းဆန်းစေဖို့အတွက် ခရီးတွေ ထွက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်က အေးချမ်းတဲ့နေရာဒေသတွေကလည်း ခရီးသွားလို့ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက အင်းလေးဒေသကပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေရဲ့ သွားရမယ့် ခရီးစဉ်စာရင်းထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အင်းလေးကန်ကိုအခြေပြုပြီး ဖြစ်တည်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုက အဓိကခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာတွေ စာတွေ သီချင်းတွေ ၊ ပန်းချီတွေ ၊ နိုင်ငံတကာအထိပေါက်ရောက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုလည်း ကမ္ဘာက မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာကိုရောက်ရင် နိုင်ငံခြားခရီးသွားတစ်ရောက်အနေနဲ့ သွားကိုသွားသင့်တဲ့ နေရာစာရင်းမှာ ပုဂံ ပြီးရင် အင်းလေကို ထည့်ပြောကြပါတယ်။ တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်း ခရီးသွားနေရာကောင်းတွေရှိပါတယ်။ သူ့ဒေသနဲ့သူ ရှုခင်းရှုကွက်တွေပေါပါတယ်။ အင်းလေးကတော့ မတူပါဘူး။
ပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာတောင် အေးချမ်းမြမှုကိုပေးနိုင်တဲ့ အေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာကတကြောင်း ၊ တောင်တွေကာရံပြီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အင်းလေကန်ရဲ့ သဘာဝအလှတရား၊ ရေပေါ်မှာ လှေကိုခြေနဲ့လှော်ခတ်လို့ သွားလာကြတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြတ်သန်းသွားလာပုံတွေကြောင့်လည်း ဒီကန်ကိုဗဟိုပြုတဲ့ ခရီးစဉ်တွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ကချင်ပြည်နယ်က အင်းတော်ကြီးကန်ပြီးရင် ဒုတိယအကြီးဆုံးရေကန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်းလေကန်ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့မှာ တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကန်ရဲ့ အရှည်က ၂၂ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားပါတယ်။ ကန်ရဲ့အရွယ်အစားက ၁၁၆ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပြီး ကန်ရဲ့ရေဟာ ပင်လယ်ပြင်မျက်နှာပြင်အထက် ၉၀၀မီတာမှာ တည်ရှိပြီး တောင်ပေါ်ဒေသမှာရှိတဲ့ ကန်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အင်းလေးကန်ကို ပြုလုပ်တူးဖော်ထားတာမဟုတ်ဘဲ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေကာ သဘာဝအလှတရားများဖြင့် ပြည့်နှက်နေတဲ့ လှပကန်ကြီးတစ်ကန်ဖြစ်နေတာကြောင့် အင်းလေးနဲ့ပတ်သက်သမျှက သဘာဝတော တောင်အငွေ့အသက်ကို အပြည့်အဝခံစားရပါတယ်။
အင်းလေးကန်ကို အလည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ နိုဝင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းသွားပါက လည်ပတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအရ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ငါးဆူ ဖူးမျှော်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်း ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေက သွားလေ့ရှိတဲ့ အင်းလေးဒေသမှာ ခရီးသွားတွေရဲ့ နေရေး ၊ စားသောက်ရေးနဲ့ သွားလာစရိတ်တွေက သာမန်အသုံးစရိတ်ထက်နည်းနည်းလေးပိုရုံကလွဲလို့မရှိပါဘူး ။ ကန်ပေါ်မှာ မော်တော်ဘုတ်တွေနဲ့ သွားလာနိုင်မှာဖြစ်သလို ဈေးနှှုန်းကလည်း သင့်တဲ့အတွက် ဘတ်ဂျတ်ချွေတာသူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့် အင်းလေးကန်အတွင်းက နေရာအစုံကို သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကန်ပေါ်မှာစက်လှေစီးရင် အင်းလေးကန်ရဲ့ အလှကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်သလို တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေနုအေးလေးများရဲ့ အထိအတွေ့ကိုလည်း ခံစားရမှာပါ။ ဖြတ်သန်းသွားရင်း ကန်ပေါ်မှာလှေကို ခြေနဲ့လှော်ရင်း ကွန်ချငါးဖမ်းနေကြတဲ့ ဒေသခံတွေကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အချက်များစွာထဲက တစ်ခုဖြစ်နေမည်ဆိုတာကလည်း လွဲမှားစရာမရှိပါဘူး။ အင်းလေးကန်ပေါ်လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့ အင်းသူအင်းသားတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီးနိုင်ငံတကာဆုရပုံတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေတာလည်း အခုထိအောင်ပါပဲ။
ကန်အတွင်းကို လေ့လည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်းမျော်များပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သီးပင်စားပင်တွေကို မြင်တွေ့နိုင်မယ့်အပြင် အင်းသားတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ အင်းလေးကန်၏ သန့်ရှင်းသာယာမှုကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အင်းလေးကန်အတွင်းမှာ လှေပေါ်တွင်သာ ရောင်းဝယ်မှုများပြုလုပ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရေပေါ်ဈေးမှာ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေပေါ်ဈေးဆိုတဲ့အတိုင်း ကန်ရေပြင်အပေါ်မှာပဲ လှေတွေဆိုင်ပြီး ရောင်းကြတဲ့ဈေးဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင် စိုက် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ ကောက်ပဲသီးနှံအစုံ၊ ဒေသထွက် စားသောက်ကုန်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းတွေကို လှေတွေတစ်စီချင်းအပေါ်မှာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဝယ်သူရော ရောင်းသူရော လှေတွေပေါ်ကအရောင်းအဝယ်လုပ်ကြတဲ့ မြင်ကွင်းက သာမန်လမ်းလျှောက်ပျံကျဈေးတွေနဲ့ ကွဲပြားပါတယ်။ အင်းလေးကန်မှာ လုပ်တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ ။ လှေတွေဟာ အင်းသားတွေအတွက် တော့နိစ္စဒူ၀ မရှိမဖြစ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်တော့ အင်းလေးကန်ကို မပျက်စီးစေဖို့ ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ ဒေသခံတွေနဲ့ ပညာရှင်တွေက ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပြုပြင်တွေ ပြုလုပ်နေရပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးလာမှုတွေကြောင့် အင်းလေးကန်က တဖြည်းဖြည်း ရေလျော့နည်းပြီး ကောလာရတဲ့အခြေအနေနဲ့ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်
၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ စံချိန်တင် ပူပြင်းခဲ့တဲ့အပြင် မိုးနောက်ကျခြင်း၊ ရေခန်းခြောက်ရှားပါးခြင်းများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အင်းလေးကန်မှာ ရေပြင်ပမာဏလျော့ကျလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းကာ ဆက်လက်ဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။
ဒေသထွက် အစားအစာကိုမှ မြည်းစမ်းချင်သူတွေအနေနဲ့ ညောင်ရွှေမြို့ထဲမှာ လှည့်လည် စားသောက်နိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် သဘာဝအလှတရားကို ခံစားပြီး အရသာရှိရှိ စားသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ညောင်ရွှေမြို့နဲ့ မနီးမဝေး ခေါင်တိုင်ရေပူ သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ လယ်တောအိမ်လို စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သက်တောင့်သက်သာသွားလာသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာလည်ပတ်လို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ တောတောင်တွေနဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေကို ဝိုင်လေးသောက်ရင်း ခံစားချင်တယ်ဆိုရင် အင်းလေးကန်နဲ့ မနီးမဝေးမှာ တည်ရှိတဲ့ ညောင်ရွှေမြို့က Red Mountain ကို စက်ဘီး (သို့) ဆိုင်ကယ်စီးကာ သွားရောက်လို့ရပါတယ်။ မော်တော်ကားနဲ့သွားတာထက် ဒီခရီးက စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်တွေကိုယ်တိုင်စီးပြီးသွားတာပိုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုကို ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှမ်းပြည်ရဲ့အလှ ရှမ်းပြည်ရဲ့ ရာသီဥတုအနေအထားကို အသေးစိတ် ခံစားနိုင်မှာပါ။ အင်းလေးကို ကျွန်မနောက်ဆုံးရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခေါက်မှာတော့ Red Mountain တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ ဝိုင်းလေးသောက်ရင်း ၊ တောတောင်ရှုခင်းတွေရှုစားရင်း အေးချမ်းလှတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ရယ် လို့တောင် ငေးမောရေရွတ်မိပါရဲ့ ။
Previous articleYangon Approves 49 Investments in First Three Months of Fiscal 2020
Next articleKBZPay Launches New Short-term Loan Offering